Khariidadda Khayraadka Khariidadaynta 10 Qalabka Calaamadeysan ee Shabakada Barnaamijka
Meelaha oo ku jira dhacdooyin kala duwan, soo saara macluumaadka waxtarka leh ee webmaska, culimada, suxufiyiinta, barnaamijyada, horumarinta, iyo bloggers. Waxay ka caawiyaan inay xogta ka soo qaataan bogag badan oo shabakad ah waxaana si ballaaran loo isticmaalaa shirkadaha iyo shirkadaha cilmi-baarista suuqa. Waxa kale oo loo isticmaalaa in la xareeyo xogta laga helo lambarrada taleefannada iyo emaylaha laga helo goobo kala duwan. Xataa haddii aad dukaameysid oo aad rabto inaad la socoto sicirka alaabta kala duwan, waxaad isticmaali kartaa qalabkan shabakadaha buqcadaha iyo codsiyada.
1. Xagto Daran ama Dexi.io
Cloud Scrape ama Dexi.io waxay taageertaa ururinta xogaha laga helo boggag kala duwan oo aan ubaahnayn in lagu soo dejiyo qalabkaaga. Waxaa loola jeedaa qalabkan loo heli karo oo loo adeegsan karo internetka oo uu leeyahay tifaftiraha guud ee browser-ka ah si aad u heshid waxyaabihii lagaa sameeyey. Xogta la soo saaray ayaa lagu keydin karaa qaababka CSV iyo JSON, iyo Box.net iyo Google Drive.
Waa warshad hawo ku-ool ah oo ku-ool ah iyo codsashada saarista xogta. Tani waxay u ogolaanaysaa horumarinta iyo dadka websaydhka ah inay helaan macluumaad faa'iido leh oo xog-sheeg ah gudahooda. Scrapinghub ayaa waxaa isticmaala buugaagta kala duwan iyo cilmi baarayaasha ilaa hadda. Waxay leedahay lataliye caaqil ah, oo bixiya taageero ka dhan ah boodhyada xun iyo xoqista goobta oo dhan saacad gudaheeda.
Qeybta ugu fiican ee VisualScraper waa in xogta loo dhoofiyo qaababka sida SQL, XML, CSV, iyo JSON. Waa mid ka mid ah xogaha ugu daba-dheer iyo faa'iidooyinka ugu faa'iideysan ee codsiyada internet-ka oo ka caawinaya soo-saarka iyo qaadashada macluumaadka waqtiga dhabta ah. Qorshaha lacagta caymiska ayaa kuugu kici doona $ 49 bishiiba wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad hesho wax ka badan 100k.
Waxaa ugu fiican ee loo yaqaano dhise-gareeyaha online-ka iyo foomamka xogaha kala duwan ee dadka isticmaala. Import.io soo dejinta xogta laga helo boggag kala duwan oo laga dhoofiyo faylasha CSV. Waxaa loo yaqaannaa tiknoolajiyad casri ah waxayna awood u leedahay inay qaadato malaayiin bog oo maalintii. Waxaad soo dejisan kartaa oo aad dhaqaajin kartaa import.io lacag la'aan. Waxay ku waafaqsan tahay Linux iyo Windows waxayna xisaabisaa akoonnada internetka.
Waa mid ka mid ah codsiyada wax soo saarka ugu fiican. Qalabkani wuxuu si sahlan oo toos ah u heli karaa xogta habaysan iyo wakhti-dhab ah waxayna ku xayeysiisaa boggag kala duwan. Waxay ku heli kartaa natiijooyin aad rabto in ka badan 200 luuqadood waxayna kaydisaa wax-soo-saarka XML, RSS iyo qaababka JSON.
Waxay noo ogolaaneysaa inaan soo saarno bogga oo dhan, blogyada, goobaha warbaahinta bulshada, ATOM ama RSS. Waxay u kaydisaa xogta qaab la akhristo oo la isku bedeli karo, iyada oo ay ugu wacan tahay API-koodhka loogu talagalay maareynta xogo kala duwan oo leh isugeyn spam badbaado. Waxay ka caawisaa ka takhalusidda spam waxayna ka hortagtaa isticmaalka luqadda aan habboonayn, hagaajinta tayada xogtaada iyo xaqiijinta amnigeeda.
8. Dib u hubinta Hub
Waa Firefox caan ah oo lagu daray waxyaabo fara badan iyo sifooyin wax soo saarka. OutWit ma aha oo keliya in la soo uruuriyo xogta laakiin dukaameysiiyo oo ku uruuriso mawduucaaga qaab habboon oo loo akhrisan karo. Waxaad xoqin kartaa nooc kasta oo bog ah bogga iyada oo aan loo baahnayn codad.
Waa mid kale oo awood leh oo la yaab leh websaydh iyo codsiyada burburinta xogta. 80legs waa qalab dabacsan oo u habaynaya shuruudahaaga oo soo dejiya xog badan oo deg deg ah. Warshaddan shabakada ah ayaa xayirtay in ka badan 600,000 domes ilaa hadda waxaana loo isticmaalaa kooxda sida PayPal.
Xajiyaha waa firaaqo caan ah oo faa'iido leh oo leh Chrome oo leh waxyaabo fara badan oo laga soo saaro xogta iyo sahamintaada internetka oo sahlan. Waxay soo dhoofisaa xogta la xoqay ee Google-ka waxayna ku habboon tahay labada bilowga iyo khubarada. Waxaad si sahlan u dallaci kartaa xogta calaamaddeeda kumbuyuutarrada iyo Gawaarida oo soo saara XPathycins yar oo ku salaysan shuruudahaaga Source .